Google Classroom Basic and Mastery Course | Myanmar Online School
Google Classroom Basic and Mastery Course
Let's fight COVID-19 and deliever quality courses via Google Classroom
Education Trends in Covid Period
လက်ရှိအချိန်ကာလမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြောင့် ကျောင်းတွေ၊တက္ကသိုလ်တွေ၊သင်တန်းတွေ အားလုံး ပိတ်ထားရတဲ့ အချိန်မှာ အွန်လိုင်း သင်ကြားရေးအတွက် နည်းပညာတွေကို အသုံးချပြီး ထိထိရောက်ရောက် စာသင်ကြားနိုင်တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမကောင်းများ ပေါ်ထွက်စေရေးအတွက် Online Coaching Course များ စတင် သင်ကြားပေးဖို့ အစီအစဥ်တခု ဖြစ်ပါတယ်။
Google App တွေကိုအသုံးချပြီး သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကို အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ ဒီလိုမှ လာရောက်သင်ကြားသူတွေလည်း အဆင်ပြေပြီး အွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်အမှန်ကို ခံစားရမှာပါ။
Google Classroom ကိုအသုံးချပြီး အပြန်အလှန် interactive အတန်းတွေကို ပိုမိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပိုလို့စနစ်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Docs၊ Slides နဲ့ Form တွေကိုအသုံးချပြီး အတန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြင်ဆင်တာ၊ assignment ပြုလုပ်တာတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် သင်ပေးမှာပါ။ အွန်လိုင်းသင်ရတဲ့အခါ ကျောင်းသားက စာထဲစိတ်မပါပဲ အာရုံအခြားရောက်နေတတ်မှာကို ဆရာ၊ ဆရာမတိုင်း စိုးရိမ်ကြတာအမှန်ပါ။ ဒီအတွက်လည်း extension တွေသုံးပြီး အပြန်အလှန် interactive ဖြစ်မယ့်အတန်းမျိုး၊ အာရုံဖမ်းစားနိုင်မယ့် သင်ခန်းစာတွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုကို သင်ကြားပေးသွားဦးမှာပါ။ အမှတ်ခြစ်ဖို့၊ ကျောင်းသားတွေထပ်တဲ့ စာတွေကို ကြည့်ရမယ့် အချိန်ကို ထက်ဝက်သက်သာအောင် လုပ်ပေးမယ့် automation tool တွေကို ပြောပြပေးမှာမို့ အချိန်ကုန်သက်သာ၊ လူလည်းမပင်ပန်းရတော့ဘူးပေါ့။ သင်ရဲ့အွန်လိုင်းအတန်းတွေကို မတူညီတဲ့ apps တွေ၊ extension တွေသုံးပြီး system ကိုသာအလုပ်လုပ်ခိုင်းထားလိုက်ပါ။ လူက အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ထိုင်ကြည့်နေစရာမလိုပဲ အလုပ်ကလည်ပတ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီအတန်းတက်ဖို့ ဘာမှမလိုအပ်ပါဘူး။ လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကို ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပေးမှာ မို့လို့ပါ။ ကွန်ပျူတာတလုံးကို အခြေခံသုံးတတ်ပြီးတော့ အင်တာနက်ကောင်းကောင်းရှိမယ်ဆိုရင် ရပါပြီ။
အကယ်၍ သင်က စာသင်ကျောင်းတွေ ပိတ်လိုက်ရလို့ အွန်လိုင်းအတန်းကို စတင်ပြီးဖွင့်ချင်တဲ့သူ၊ Google Suite နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်ကစရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီ course က သင့်အတွက်ပဲ​ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ Google Suite extension၊ Apps တွေအသုံးချပြီး အချိန်နဲ့တပြေးညီ တပြိုင်နက်တည်းဖွင့်ရမယ့်အတန်းတွေ၊ အချိန်ကာလမတူပဲ ဖွင့်မယ့်အတန်းတွေကို ဘယ်လို organise လုပ် manage လုပ်ကြမလဲဆိုတာကို သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Google Meets၊ classroom၊ docs တွေကို အသုံးချပြီး သင့်ရဲ့အတန်းသားတွေကို ဆက်သွယ်တာ၊ အတန်းကို အမြဲ up-to-date ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပါ အသေးစိတ်သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Grading နဲ့ email စနစ်ကို automate လုပ်ထားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့အချိန်ကို ထက်ဝက်သက်သာစေပါတယ်။
သင်ခန်းစာအဆုံးမှာတော့ အွန်လိုင်းအတန်းတွေကို အပြင်သင်တန်းမှာလိုပဲ စနစ်တကျပြင်ဆင်ပြီး ကျောင်းသားတွေလည်း လေ့လာရလွယ်ကူ၊ အကျိုးလည်းရှိစေမယ့် အတန်းတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းအတန်းတွေ စချင်ပေမယ့် ဘယ်ကနေစလုပ်ရမှန်းမသေချာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊အွန်လိုင်းသင်တန်းတွေတက်ချင်ပေမယ့် Google Suite နဲ့ extension၊ app တွေကို သေချာနားမလည်လို့ အတန်းတက်ဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊Google Suite ရဲ့အသုံးပြုပုံ သဘောမပေါက်လို့ option ​တွေကို အသေးစိတ်ကို လေ့လာချင်သူများ၊ Google classroom ရဲ့ organisation နဲ့ communication တွေကို နားမလည်လို့ အခက်ကြုံနေသူများ၊အွန်လိုင်းအတန်းတစ်ခုကို အပြင်အတန်းတစ်ခုပြင်ဆင်ရတာထက် နှစ်ဆအချိန်ပိုယူပြီး ပြင်ဆင်​နေရသူများ လေ့လာသင်ကြားသင့်ပါတယ်။
1.Education Trends in Covid Period (3:05)
2.Online Learning Trends after COVID-19 (3:44)
1. Create Google Account to use Google Classroom (6:22)
2. Setting up the Google Classroom (6:40)
3.Differentiate between FB,Myanmar Online School and Google Classroom (8:19)
4. Google Classroom Settings You Need to Know (17:10)
5.How to invite students into class (7:37)
6.Google Calender for Events and Virtual Meetings Setup (6:54)
7.Join FB Group (2:27)
1.How to create assignments in Google Classroom (11:18)
2.Add Quiz to Google Classroom (14:04)
The best course for online teachers
Online Learning Trends after COVID-19
COVID-19 ရောဂါဆိုးကာလ ပြီးသွားခဲ့ရင်ရော၊ Online Training တွေရဲ့ အသုံး၀င်မှုက လျော့ကျသွားမလား၊ တိုးတက်လာမလားဆိုတာကို ဆရာ အင်ဒရူးက ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။